China marindrano tampon-trano anaty baoritra Unit Manufacturers sy Suppliers | Bueco
Bueco tampon-trano vondrona anaty baoritra no ampiharina ao amin'ny indostria sy ara-barotra toy ny saha trano fandraisam-bahiny, toeram-pivarotana lehibe, alalana miresaka fivarotana, birao sy ny orinasa atrikasa. Mampifandray tanteraka izy ireo toetra maro ny lehibe-iray salantsalany afovoany / c, toy ny tsy hanahirana, fampiononana, avo-kilasy, ny fahatsorana sy ny manovaova. Ny endrika vaovao mampiasa ny habakabaka Module, ny endri-javatra madinika-barotra salantsalany trano maoderina toerana, ka rehefa ho hariva sy ny hafanana rivotra niely ho averagely efitra tsirairay mba hanangana ...
Bueco tampon-trano vondrona anaty baoritra no ampiharina ao amin'ny indostria sy ara-barotra toy ny saha trano fandraisam-bahiny, toeram-pivarotana lehibe, alalana miresaka fivarotana, birao sy ny orinasa atrikasa. Mampifandray tanteraka izy ireo toetra maro ny lehibe-iray salantsalany afovoany / c, toy ny tsy hanahirana, fampiononana, avo-kilasy, ny fahatsorana sy ny manovaova. Ny endrika vaovao mampiasa ny habakabaka Module, ny endri-javatra madinika-barotra salantsalany trano maoderina toerana, ka rehefa ho hariva sy ny hafanana rivotra niely ho averagely efitra tsirairay mba hanangana "Zero" hafanana hafa. Afa-tsy, ivelan'ny trano rivotra madio dia afaka aoka ianao hifantoka tanteraka. Ny rivotra dia afaka mifandray amin'ny lalana an-trano tanteraka tarehy izay miafina ka tsy misy toerana malalaka hipetraka. Efa lasa taranaka vaovao ny vokatra Afovoany A / C sy ny nentim-paharazana ara-barotra iray / c.
1. maro vokatra sy ny sakany fampiharana
Ny andian-tampon-trano dia ahitana vondrona maro samy hafa tanteraka fepetra arahana izay afaka hihaona ny tinady ny an-trano sy ny toerana ara-barotra, ary hanolotra anareo ho aina sy mahafinaritra ny tontolo iainana.
2. tanteraka rafitra rivotra, tsotra sy ny fahadiovana, tsy singa, mora fikarakarana
Ny malefaka sy fohy manao ny fikojakojana endrika tena tsotra. Disassembling horonan maro avy amin'ny lafiny iray koa amin'ny tarika dia afaka hanamboarany anjara amin'ny tarika.
3. Microcomputer manan-tsaina maso
Mety hahatratra fomba fanaraha-maso: hihena, fanafanana, rivotra ary tsy voatery hihena malalaka. Izany ihany koa ny asan'ny amin'ny fotoana sy ny tsy fahombiazana-miseho eny.
4. Excellent fampisehoana
World marika fanta-daza ny faritra lehibe no ampiasaina. Mba hiantohana ny voalanjalanja lalao ny vondrona, hentitra fampisehoana fanaovana fitiliana atao. Ankoatra ny tarika mihazakazaka tapaka sy ny hovitrovitra sy ny tabataba no mahomby fehezin'ny ny fampiasana ny maro-Vane dity centrifugal mpankafy, fantatra izao tontolo izao-compressor fahombiazana avo sy ny elaborative-maso natao, maotera, sns
5. milamina sy mora fandidiana fikojakojana
Hanohina ny ambany indrindra feon'ny ny iray / c efitra. Ny iray / c vondrona dia napetraka lavitra ny iray / c faritra izay mahafeno ny fitakiana ny Indoor feo ambany ka hatramin'ny lehibe indrindra ambaratonga. Amin'ny fananganan'anaka amin'ny fahombiazana avo sy iva feo centrifugal mpankafy mahatonga ny mangina tanteraka fandidiana.
Free hihena lojika:
1. Nony fanafanana, ny rivotra madio damper mihidy, ary hiverina rivotra damper dia 100% misokatra;
2. Raha ny hihena:
a. An-trano, rehefa efitrano mari-pana (hafanana Set) - ivelan'ny trano hafanana ≥ 4 ℃, rivotra madio damper dia 100% misokatra, ary hiverina rivotra damper dia 100% nikatona, afa-tsy ny evaporator mpankafy dia nihazakazaka hitsoka rivotra ho efitra;
b. Rehefa 0 ℃ ≤ an-trano efitrano mari-pana (hafanana Set) - ivelan'ny trano hafanana <4 ℃, na rivotra madio sy hiverina damper rivotra damper dia mihidy, sy ny tarika dia tsy mihazakazaka;
c. Raha an-trano efitrano mari-pana (hafanana Set) - ivelan'ny trano hafanana < 0 ℃, ny miverina rivotra damper dia 100% misokatra, ary ny rivotra madio damper dia 100% mikatona, dia ny compressor, condensing mpankafy sy ny evaporator mpankafy hiasa ara-dalàna mba nitsoka mangatsiatsiaka rivotra an- efitra.
Bueco hafanana fanarenana rivotra madio vondrona manova ny trano mangina tao an-trano miaraka amin'ny faniriana marina ny asa, ny mandoto rehetra toy ny setroka, sns vovoka sy ankasitrahana ho nanala ny setroka sy ny rafitra famatsian rivotra, toy izany koa ny an-trano kalitaon'ny rivotra madio sy mahazo aina. Mponina tao an-tanàna ny mandany fotoana mihoatra ny 90% amin'ny efitrano, ny rivotra-miankina efitrano rivotra tsara zava-dehibe ny fahasalamana. Bueco hafanana rivotra madio rafitra fanarenana lasa "havokavoka" ny trano maoderina saika, dia vaovao rivotra madio ara-pahasalamana sy ny tontolo iainana namana vokatra.
Ny fampiharana ny Nano sarimihetsika teknolojia, marindrano mifanohitra mifanohitra mikoriana teknolojia, antistatic & fikojakojana maimaim-poana ny teknolojia sy ny attenuation teknolojia, Bueco voavaha ny olana ny fahombiazan'ny ambany hafanana nentim-paharazana sitrana vondrona, hafanana fanarenana tanteraka fahombiazana hatramin'ny 75%. Ny hafanana fanarenana rivotra madio vondrona mampihena ny famerana mari-pana entana, voalohany fampiasam-bola sy ny vola lany ny rafitra asa.
Hihena asa amin'izao fotoana izao
Fanafanana asa amin'izao fotoana izao
380/3/50 ( 60Hz-katerena )
Direct noroahina axial mpankafy
Direct noroahina centrifugal mpankafy
Fehin-kibo noroahina centrifugal mpankafy
Refri. anjara-raharaha vola
Hermetically voaisy kase Scroll Compressor
3.5 6.3 +
8.5 4.3 +
Loha Hevitra 3
Hihena pana: Indoor hafanana db: 27 ℃, WB: 19 ℃; ivelan'ny trano hafanana db: 35 ℃, WB: 24 ℃.
Previous: Mitsangana Ducted Split Unit
Next: Tropical tampon-trano anaty baoritra Unit
Tampon-trano namboarina marindrano anaty baoritra Unit
Mitsivalana rivotra madio tafontrano anaty baoritra Unit
Mitsivalana tampon-trano anaty baoritra Air Conditioning Unit
Mitsivalana tampon-trano anaty baoritra Commercial Air-javatra mampahalefaka
Pharmaceutical Industry Ahu, Industrial Closed Circuit hihena Tower, Tube Fin Dry Cooler, Fresh Air Handling Unit, Common Series Dx Air Handing Unit, Fan Coil Units Ceiling Mounted,